galay Land | Apg29
caga waa dalka samada, waxaan ku jira ruux la Kulaashaan kartaa in masaafada u.
Laakiin Ciise waa tijaabo ku saabsan guddida, iyo inkastoo jirrabaya hirarka sare marka farsamada dekedda jannada.
Mu'miniinta inta badan waxaa loo ekaysiiyaa nin raggii baxriyiinta safarka badda ee nolosha, jidkii uu u soo dekedda jannada.
On markabka, waxaa hore u ahaa fiirsasho ah, badmaaxa ah oo eegi baxay dhinaca kale oo badda. Wuxuu dambiil on top of ay daqal ah, rakibay labo ka mid ah casriga uu arki karin haddii markabka soo dhawaaday dalka fadhiistay. The ceeryaamo iyo ceeryaamo badanaa noqon kartaa adag si ay u arkaan dulmar ee dalka ay kusii.
Waxaan kuwa heshay Ciise baa imanaysa dhinaca kale oo badda nolosha halkaas oo dabeylo inta badan anaan iyo badaha waa xunxunna. caga waa dalka samada, waxaan ku jira ruux la Kulaashaan kartaa in masaafada u. Laakiin Ciise waa tijaabo ku saabsan guddida, iyo inkastoo jirrabaya hirarka sare marka farsamada dekedda jannada.
Kitaabku waxa uu sheegayaa dadka ka dhur sugeynaa waddan ka wanaagsan ka badan kuwa dhulkuna. In Cibraaniyada. 11: 13-14, 16, waxaan ka akhrisan ku saabsan: Aayadda 13:
"In iimaan, kuwaas oo dhan ku dhintay helo wixii loo yaboohay. Waxay kaliya ma arag in masaafada u, iyo Rumaynay Quraanka iyo waxa salaamay oo waxay qirteen inay ku ahaayeen shisheeyayaal iyo dad sodcaal ah dhulka. "
Dadkani waxay ahaayeen dad sodcaal ah kuwaas oo wixii ka dambeeyey iyo kor arkay - in masaafada u. Waxay arkeen dalkii jannada masaafada, oo waxay qirteen inay dalka soo degta dhulkooda hooyo ma ahaa. danaha waxay ahaayeen jannada, taas oo loomed in masaafada u. Laakiin sababta oo ah waxay u dhiman kartaa, iyagu ma ay heli karto in ay gool u doonaysa ay. Aayadda 14:
"Waayo, kuwii odhan tani waxay muujinaysaa in ay raadinayso hooyo ah."
Taas macnaheedu waa ay raadinayso wadan kale, waddan ka wanaagsan yahay mid ka mid ah ay ka yimaadeen. Waxaa laguma macnaysan karo in dalka kale oo aan ahayn dal jannada, ay raadinayso. By uu hadalka iyo shaqada uu naftiisa ayaa muujisay in ay ahaayeen shisheeyayaal Adduun. Aayadda 16:
"Laakiin imminka waxay aad u doonayaan waddan ka wanaagsan, mid ka mid ah jannada. Haddaba sidaas daraaddeed Ilaah ka xishoon maayo in loogu yeedho Ilaahood, waayo, wuxuu iyaga u diyaariyey magaalo for. "
Samada loo hagaajiyey ee dhammaan quduusiinta Ilaah hortiisa ay wada dhammaadeen ay Xajka dhulka. The Ilaah bay u doortay inuu jecel oo u adeegi jiray Ilaahooda ah.
Ibraahim ayaa sidoo kale sugaya waddan ka wanaagsan:
"Waayo, isagu wuxuu sugayay magaalada taas oo uu leeyahay aasaas leh oo kan dhisay oo sameeyey uu Ilaah" (Heb. 11:10).
In turjumaad kale u qornaa sidan:
"Maxaa yeelay, isagu expectantly iyo kalsooni sugayay."
Ibraahim socday in a gool samadu iyo weligeed ah. Waxa uu ku noolaa nolol oo dhan degsiimooyinka ku meel gaar ah. Waxa uu diyaar u ah inay sidaa sameeyaan wuxuu ahaa, sidii uu ku sugayay magaalada taas oo uu leeyahay aasaaska. Uu rabitaan ahayd in wax joogto ah, ka duwan nolosha reer guuraaga ah ayuu ku noolaa, halkaas oo uu ku noolaa teendhadiisii. ugama uu rajeyneynaa in magaalo ka mid ah dunida, laakiin ah mid Ilaah ka dhisay. Dhulka aasaaskiisii ​​oo waa aan degganayn oo aan la hubin, laakiin magaalada in Abraham sugayay waxaa la dhisay on aasaaska adag, oo aan marnaba la gariirin karin.
Si magaalada, innagu waxaynu nahay kuwa jidka ku, waxaan leenahay dhalashada our jannada ku jira. Waxaan eegi waxaad la taag darnaan oo la filaayo in ay markii ugu markii Ambassador samaawi ah our, Ciise iman doonaa oo waxaa nagu soo qaado.